mushaTURKEYTurkish Black Sea Coast81 Duzce TurkeyTram Inotangisa Kutanga kuiswa muDuzce Istanbul Street
Tram Inotangisa Kutanga kuiswa muDuzce Istanbul Street
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 81 Duzce Turkey, Railway, GENERAL, Turkish Black Sea Coast, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, TURKEY, chitima 0
tram njanji dzinounzwa kutanga mune duzce istanbul Street
Meya weDüzce, uyo akagadzirira chirongwa cheIstanbul Street. Faruk Özlü, akasundira mabhatani ekuitwa kweiyo chirongwa chitsva. Iyo itsva matatu-nzira chirongwa mumugwagwa chinozotanga kubvisa tram njanji. Kune izvi, mugwagwa uchavharwa kune traffic kubva ku8 Gumiguru 22: 00: 10 kusvika 00: 00: XNUMX.
65. Minister weHurumende Science, Industry Technology uye Meya weDüzce Faruk Özlü akatsinidzira bhatani rekuti riitise chirongwa chakagadzirirwa İstanbul Street.
Duzce Municipality iri kutanga kushanda mupurojekiti nyowani ichaitwa paIstanbul Street. Njanji dzeTram dzinotanga kubviswa kuitira kuiswa kweiyo purojekiti nyowani, iyo inosanganisira mota dzemotokari, vafambi uye vanoshandisa mabhasikoro mumugwagwa. Achitaura nezvenyaya iyi muchiitiko chaicho Düzce Municipality, Düzce Gavhuna Hofisi yemapurisa Dhipatimendi Rezvekufambiswa Kwebazi Dhivhiri rakanyora.
Zvitima zveTram zvinotanga kubhurikidzwa kuti zvigadzirwe chirongwa chitsva-chemugwagwa mumugwagwa. Yakanyorwa mutsamba iri pamusoro pebasa raifanirwa kuitirwa nzira yebhasiketi yakarongwa kuti iitwe kuruboshwe rwekuyerera kwemugwagwa, zvirevo zvinotevera zvakapihwa: "Sezvo mugwagwa ucharongwa uye basa reusalt paDüzce Merkez, İstanbul Street naiye manenji, mugwagwa unobva ku08 / 10 / 2019 zuva uye nguva 22: 00. ""
Düzce Municipality yakataura kuti basa riri mumugwagwa richapedzeredzwa pakati pemisi yakataurwa muchinyorwa ichi, nekutenda kune vagari vaive nemanzwiro panguva yezvidzidzo.
Düzce Istanbul Street nostalgic tram tender yakaitwa 04 / 08 / 2017 Chime Street mu Beyoglu, Istanbul Project, younyoro nostalgic chitima acharidza mhepo yakaitwa vakakurumbira Istiklal Caddesi. Mutengo we tram kumasisita ichava 1 mamiriyoni 700 zviuru TL. Duzce Mayor Mehmet Keles, mumwe wezvidzidzo zvevadzidzi veIstanbul Street, iri kuramba ichifamba. Migwagwa yakanga yakarongedzwa kuti ichinjwa kuva nzvimbo yekutengesa. asi hope mayors kubva anenge 20 makore unimplemented kusarudza kushandisa chirongwa Duzce Mayor Mehmet Keles, 'Jubheri ndichapfuura achiti' 4 mumugwagwa akavharwa kuti vaiitwa July. ...
25 zviuru zvitanhatu zveasphalt ichadururirwa mumigwagwa yeBoodova 23 / 02 / 2015 25 zviuru zvitanhatu zveasphalt ichadururirwa mumigwagwa yeBroovova: Muzinda we Bornova weIzmir wakatora matanho ekuvandudza migwagwa munharaunda. Kuti tive nekugadzirisa migwagwa yakasakara, masuwa akazotanga kugadzirira mamiriyoni gumi nemazana gumi emadhora ekupisa moto weAphalt tender uye achavandudza mugwagwa wakareba makiromita 20 kubva kumusoro kusvika pasi sezvo mamiriro okunze achipisa. 15 zviuru zvitanhatu mune rimwe runyararo runyararo nemabhanhire richaitwa pamativi akasiyana-siyana. Mavara acho achasvika makiromita 5. Bornova Municipality, 4 zviuru zvitanhatu zveasphalt ane ruzivo rwekutsvaga ichasarudza pamigwagwa ipi yekushandisa. Mukuwedzera kune zvisarudzo zvakagadzirwa nemasangano emaspala, zvido zvevagari vemo uye zvinoda zvemuhtars zvichatorwa. Mukhtars inodiwa pane nyaya ...
MuDüzce, Istanbul Caddesi ichaendeswa kunzira yekutya 19 / 07 / 2012 Düzce Mayor Ismail Bayram, Istanbul Street mushure mekuvharwa kwemotokari kuenda kumotokari, akadaro kuchinja. Tichafamba netsoka, Bayram akati Bayram. İsmail Bayram akaongorora mabasa ekuvhara kweIstanbul Street uye kushandiswa kwekuvhara. Muhurukuro yake pamusoro pegadziriro iri mubvunzo, Sachigaro akati, ega Basa redu nderokuvhara mumugwagwa mumugwagwa uye kuisa sarimi. Kuti tikwanise kusvika pane ino takati tichaenda kumatanho emutambo. Takaisa basa rekupaka. Iye zvino tava kugadzira kugadzirira kwakanaka kwekushandisa rimwe chete. Ichokwadi, ivo vose vanoda mari itsva. Zvidzidzo zvemangwana zvefodya zvidzidzo. Urongwa ihwohwo hwakanaka O
Duzce Istanbul Street Inotungirwa kuMotokari Yezvitima 04 / 12 / 2018 Makore anenge 1.5 akapfuura 'Pedestrianization Project' mukati mekufambisa kwemotokari kuenda kuIstanbul Street yakavharwa kumigwagwa zvakare mangwanani ano. Dursun Ay, Meya weDüzce, patakagamuchira ruzivo pamusoro pefoni pahurukuro, akazivisa kuti mugwagwa wakadzoserwa nechisarudzo cheProvincial Traffic Commission. Akasimbisa kuti kune chinokonzerwa nechishuvo chikuru chinobva kuvanhu kusvika kumigwagwa. Kutarisirwa kwekufamba kwemwedzi kwakave kwakasununguka nechisarudzo che "Provincial Provincial Traffic Commission". Istanbul Street, iyo yakave yakazarurirwa kwemigwagwa kwemwedzi, yakazarurirwa kuenderera kwemotokari. KUBVA MUCHITATU Dursun Ay, Meya weDüzce patakagamuchira ruzivo pafoni D
Nzira yeBike Kuvakwa Nekubvisa Tram Njanji muDüzce 07 / 08 / 2019 Düzce Municipality, Istanbul Street akataura chirevo nezve chirongwa chakagadzirirwa. Saka, kufunga kwenguva refu kwemugwagwa kwakava pachena. Pakati pechikamu chechirongwa ichi, chidzidzo chichaitwa kukurudzira kushandiswa kwemabhasiketi panzvimbo pekutyaira mukati meguta. Gurukota reSainzi, Maindasitiri, Tekinoroji uye Meya weDüzce Pazuva rekutanga kugadzwa kwake, Faruk Özlü akagadzirisa matanho ekubhadhara mari uye akapa kukosha pakuronga bhajeti. Munguva yesarudzo, Mutungamiri Özlü, uyo akaisa maoko ake pamapurojekiti akawanda aakataura nezvawo, akasundira mabhatani ekugadziriswazve kweIstanbul Street mumoyo weguta. Meya Özlü, aigara achibvunzana nevatengesi vematunhu, vagari uye vamiriri veNGO, akati.
Vashanyi veUkraine Admire Kayseri
Düzce Istanbul Street nostalgic tram tender yakaitwa
25 zviuru zvitanhatu zveasphalt ichadururirwa mumigwagwa yeBoodova
MuDüzce, Istanbul Caddesi ichaendeswa kunzira yekutya
Duzce Istanbul Street Inotungirwa kuMotokari Yezvitima
Nzira yeBike Kuvakwa Nekubvisa Tram Njanji muDüzce
Pasi Istiklal Street inozovhuvhuta
Bursa Tramway line ichaendeswa kune Siteler ne Tayyareci Mehmet Ali Street uye Selçukbey Mugwagwa
"Green" Ground kuNostalgic Tram Rails paIstiklal Street
Tram Kushingaira muBursa ... Kutanga Nzvimbo yeTamam Street Cafes paCumhuriyet Street
Traffic kuenda kuIstanbul Street Tram Arrangement